Kutaridzika Kwekutarisa Pazororo Vatengi Nzendo | Martech Zone
Kutaridzika Kutarisa paHoridhe Vatengi Nzendo
Chishanu, December 7, 2018 Chishanu, December 7, 2018 Douglas Karr
Kana usati wanyorera izvozvi, ndinokurudzira zvikuru iyo Funga neGoogle saiti uye tsamba. Google inoburitsa zvimwe zvinoshamisa zvekubatsira vatengesi nemabhizinesi kukura bhizinesi ravo online. Mune imwe nyaya ichangoburwa, vakaita basa rakakura pakuona matatu akajairwa mafambiro evatengi anoonekwa kutanga Nyowani Chishanu:
Iyo nzira inoenda kune asingatarisirwi mutengesi - kutanga nekutsvaga kwekufambisa, rwendo runopa ruzivo rwechimwe chinhu chiri kutengeserana online.
Sarudzo yekugadzirisa kana kutsiva - mumwe munhu anotsvaga kuburikidza nedesktop uyezve nhare, uye nekudyidzana nezviziviso kuti pakupedzisira asvike pakutenga sarudzo.
Iyo epic yemitambo yekutsvaga - mutambi anotsvaga yake inotevera kutenga koni, achitsvaga kuburikidza nharembozha nedesktop, kushanyira nzvimbo dzevatengesi nenzvimbo dzeindasitiri kuti aongorore kutenga kwake kunotevera.
Google inopa mamwe makiyi ekutora, kusanganisira vhoriyamu yekutsvaga kuri kuitwa nevatengi, kuvimba nerunhare, uye chokwadi chekuti vatengi ava havana kutarisa pazvipo.
Ndinoda kuti iwe utarise pane akati wandei maficha ayo asingafanire kuenda asingaonekwe:
Vanhu vakagunun'una pakati pemidziyo nemasvikiro - Ini ndangobva kutenga PlayStation nyowani. Ini ndaive pafoni yangu zvishoma ndichiona terevhizheni, ndichiverenga wongororo uye ndichitarisa mabundles. Zvino, pandaigara padhesiki rangu, ndaitarisa mavhidhiyo uye kuona mavhidhiyo ekuongorora. Ini ndakatoshanyira BestBuy akati wandei kuti ndione zvavaive nazvo. Shamwari yangu mutambi mukuru, saka ndakataura naye kuburikidza neFacebook ndikaita sarudzo yezvekutenga. Pakupedzisira, ini ndakawana mutengo wakakura ndikautenga online kuburikidza neWal-mart. Saka .. nhare, desktop, tsvaga, zvemagariro, ongororo, uye zvitoro zvese zvakaita chikamu parwendo rwangu.
Vanhu vanopedza nguva yakawanda vachitsvaga - Idzi nzendo hadzisi muchikamu chimwe chete, dziri pamusoro pevhiki nemwedzi. Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti makuki anopera, mishandirapamwe inoshanduka, mitsva yekutsvaga iri kufamba… zvese apo mutengi ari kutsvagisa yavo inotevera kutenga sarudzo. Kuti chigadzirwa chako kana sevhisi irambe ichioneka, iwe unofanirwa kuramba usingaregi pakuramba uchioneka uye uchikosha kwavari.
Vanhu vanoshandisa toni yekutsvaga zvemukati - Ini handikwanise kana kukuudza kuwanda kwandakaverenga, kutarisa, uye kukurukura ndisati ndatenga system yangu. Ini ndichakuudza kuti yangu yekutenga sarudzo yakaverengerwa pandakaenderera mberi nekutsvaga, zvakadaro. Ini pakupedzisira ndakatenga Pro uye VR makiti ne PlayStation yangu mushure mekuona wongororo uye kutarisa mavhidhiyo nezve kugona. Uye pandakangowana iyo system, ndakaenda kunotenga zvakare kuti uwane zvimwe zvekushandisa! Zvemukati hazvina kungofambisa sarudzo yangu, yakadzingawo zvimwe zvekutengesa.
Heano akazara infographic, Mukati merwendo rwekutenga rwevatengi vatatu vanotsvaga zuva nezuva:
Tags: mutengimutengi kutengarwendo rwevatengiReviewsTsvaga Kutengesakutenga sarudzofunga neGoogleWalmart
Iri Zano Rakanakisa reKubudirira kweMireniyumu Zvekushambadzira Maitiro
Amazon Web Services: Yakakura Sei AWS?